SAMSUNG က FLOW - က GALAXY စမတ်ဖုန်း WINDOWS 10 ကို ချိတ်ဆက်. - WINDOWS ကို - 2019
Samsung က Flow - က Galaxy စမတ်ဖုန်း Windows 10 ကို ချိတ်ဆက်.
Samsung က Flow - သဖြင့် Samsung Galaxy စမတ်ဖုန်းများအတွက်တရားဝင် app ကို, သငျသညျအဝေးမှကွန်ပျူတာနှင့်အခြားကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုထိန်းချုပ်, SMS စာတိုပေးပို့, လက်ခံသည် PC နဲ့ဖုန်းအကြားဖိုင်လွှဲပြောင်းမှုအတွက် Wi-Fi သို့မဟုတ်ဘလူးတုသ်ကျော်က Windows 10 နှင့်အတူသင့်ရဲ့ PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုမှသင့်မိုဘိုင်း device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြု တာဝန်များကို။ ဒီသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဆှေးနှေးပါလိမ့်မည်။
SMS ကို Microsoft က application များကို အသုံးပြု. သင်၏ PC ကနေပေးပို့ခြင်း, ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ AirDroid နှင့် AirMore နှင့်အတူဖုန်းကို remote access ကို: ယခင်ကဆိုက်ပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုအများအပြားပုံပြင်များထုတ်ဝေခဲ့, သင်တို့သည်သင်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်, ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကိုအဘို့ကို Wi-Fi ကိုမှတဆင့်သင့်ကွန်ပျူတာရန်သင့် Android ဖုန်းကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် ApowerMirror အတွက်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်သင်၏ကွန်ပျူတာရန်သင့်မှာ Android ဖုန်းမှပုံရိပ်များလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို။
အဘယ်မှာရှိ Samsung က Flow ကို download လုပ်ပါရန်နှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်မှုကိုထူထောင်ဖို့ဘယ်လို
သူတို့တစ်ဦးစီများအတွက် Samsung က Flow application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်သင့်ကို Samsung က Galaxy နဲ့ Windows 10 ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက်:
Android အတွက် - ထို app store ကို Play Store ကို //play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.galaxycontinuity ထံမှ
စတိုးဆိုင်က Windows Store ကို //www.microsoft.com/store/apps/9nblggh5gb0m ကနေ - က Windows 10
လျှောက်လွှာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install ပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးကိရိယာများပေါ်တွင်သူတို့ကို run သူတို့သည်တူညီသောနက်ဝပ် (ဆိုလိုသည်မှာ, တူညီတဲ့က Wi-Fi ကို router ကိုမှတစ်ဦးကို PC နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်နှင့်ကေဘယ်လ်) နဲ့ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ် Bluetooth မှတဆင့်တွဲနေကြသည်သေချာပါစေ။
နောက်ထပ် configuration ကိုခြေလှမ်းများကိုအောက်ပါအဆင့်များထားရှိရေး:
စမတ်ဖုန်းတွဲ, စာနယ်ဇင်း "Start" နှင့်ထို့နောက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်လက်ခံပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအကောင့်များအတွက် PIN ကို-code ကိုရှိမပါဘူးဆိုရင်, သငျသညျ (ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သငျသညျ PIN နံပါတ်ကို configure system setting များကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်) Windows 10 ကိုလျှောက်လွှာ၌ဤလုပ်ဖို့သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ဒီ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် optional ကိုဖြစ်တယ်, သင် "Skip" ကိုကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်။ သင်ဖုန်းကို အသုံးပြု. ကွန်ပျူတာကိုသော့ဖွင်နိုင်တော့မည်ချင်လျှင်, PIN ကုဒ်မှာ ထား. , က installed ပြီးနောက် Samsung က Flow ကိုအသုံးပြုပြီးသော့ဖွင့်ထည့်သွင်းရန်တစ်အဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူ window တွင် 'OK' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာ, တပ်ဆင်ထားသည် Galaxy Flow နှင့်အတူ device များအတွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ်။
သော့ချက် device ကိုမှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဖုန်းကိုသေချာအောင်လုပ်ပါကအတူတူပင်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါသည်, နှစ်ဦးစလုံးကိရိယာများပေါ်တွင် 'OK' ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီအခြေခံ settings ကိုတွင်သင်အသုံးပြုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြပြီးပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်။
Samsung က Flow များနှင့်လျှောက်လွှာဖြစ်နိုင်ခြေသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျ (အချည်းနှီးကျနော့်အမြင်တွင်,) ကိရိယာများ, ဒါမှမဟုတ်ဖိုင်များကို (အသုံးဝင်သော) အကြားကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်ပါတယ်တဲ့ချက်တင်ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့: ချက်ချင်းစမတ်ဖုန်းအဖြစ်လျှောက်လွှာများဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, နှင့်ကွန်ပျူတာကအကြောင်းတူညီလှပါတယ်။
သင့်ရဲ့ smartphone ကိုကွန်ပျူတာထဲကနေဖိုင်တစ်ဖိုင်လွှဲပြောင်းရန်, ရိုးရှင်းစွာလျှောက်လွှာပြတင်းပေါက်ထဲဆွဲယူပါ။ အိုင်ကွန် "စက္ကူကလစ်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသင့်ဖုန်းမှဖိုင်များကိုပေးပို့လိုသည့်ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထိုအခါငါပြဿနာတစ်ခုသို့ပွေးလေ၏: ငါ့အမှု၌, ဖိုင်တွေကိုလွှဲပြောင်းမသက်ဆိုင်ငါသည်သင်တို့ကို (က router သို့မဟုတ်က Wi-Fi ကိုတိုက်ရိုက်မှတဆင့်) ကိုဆက်သွယ်နေကြသည်အတိအကျဘယ်လို 2nd ခြေလှမ်းအပေါ်တစ်ဦး PIN ကိုသတ်မှတ်ထားဖြစ်စေမ၏, တစ်ခုခုကိုဦးတည်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ပျက်ကွက်များ၏အကြောင်းရင်းရှာပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းကဘယ်မှာစမ်းသပ်ပြီးပလီကေးရှင်းကို PC ပေါ်တွင်ဘလူးတုသ်၏မရှိခြင်းပါပဲ။
အချက်ပေး, SMS စာများနှင့်သံတမန်တို့ကိုပေးပို့ခြင်း
(သူတို့ရဲ့စာသားကိုနှင့်အတူ) မက်ဆေ့ခ်ျ၏အကြောင်းကြားစာ, အက္ခရာများ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးက Android အသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်နဲ့ Windows 10 မှသင်ဤသတိထားမိပါကသင်တစ်ဦးကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုသို့မဟုတ် instant messenger ကိုခံလျှင်, သင်အကြောင်းကြားစာမှတိုက်ရိုက်အကြောင်းပြန်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူအကြောင်းကြားစာအပေါ်နောက်ဆက်တွဲ Samsung က Flow ကွန်ပျူတာနှင့်ကလစ် နှိပ်. ထဲမှာ "တပ်လှန့်" ၏အဖွင့်ကဏ္ဍကို, သင်ကသတ်သတ်မှတ်မှတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့စကားဖွင့်နှင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအပေါငျးတို့သသည်သံတမန်တို့ကအဲဒီမှာထောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်မူရင်းကွန်ပျူတာအတူစကားလက်ဆုံအစပျိုးလို့မရပါဘူး (Windows မှာ 10 ရက်နေ့တွင် Samsung က Flow application ကိုအကြောင်း, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်များထံမှအနည်းဆုံးသတင်းစကားဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်) ။
Samsung က Flow ဖို့ကွန်ပျူတာကနေ Android Device Manager
Samsung က Flow app ကိုသင် mouse ကိုသူတို့နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းနဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဖေါ်ပြဖို့ခွင့်ပြု, ကီးဘုတ် input ကိုလည်းထောက်ခံသည်။ စတင်ရန်, အိုင်ကွန် "စမတ်ကြည့်ရန်" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ screenshots များ, ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်တင် (ဆုံးဖြတ်ချက်ငယ်, အလုပျပိုမြန်ပါလိမ့်မည်), အမြန်ပစ်လွှတ်မှုအတွက်အကြိုက်ဆုံး applications များစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးဖို့ရရှိနိုင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်။
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်လက်ဗွေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လူတစ်ဦးသို့မဟုတ် Iris နှင့်အတူကွန်ပျူတာသော့ဖွင့်
အဆိုပါ 2nd ခြေလှမ်းကိုသင် setup ကိုတစ်ဦး PIN ကိုသော့ဖွင့် created နှင့် Samsung က Flow ကို အသုံးပြု. ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ဖုန်းဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာကိုသော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ "လွယ်ကူသောသော့ဖွင့် on" ကိုဖွင့်လျှင်, ဝင်ရောက်ရန်အလိုအလျှောက်ရာအရပျယူပါလိမ့်မယ်: ဤအဆုံးစေရန်, အပြင်, သငျသညျ, အက Settings ကို Samsung Flow ဖွင့်လှစ် "Device ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု" လျှောက်လွှာကို select, အ conjugated အိုင်ကွန် settings ကိုသို့မဟုတ် Laptop ကိုကွန်ပျူတာကိုကလစ်နှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်စစ်ဆေးခြင်းကို၏နည်းလမ်းများသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ဖုန်းမဆိုလမ်းထဲမှာသော့ဖွင့်ကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Samsung က Pass ကို enabled လျှင်, သော့ဖွင့်ပြုလုပ်တဲ့ကိုယ်ရေးဒေတာ (လက်ဗွေ, မျက်ဝန်း, မျက်နှာ) ၏လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ငါကဒီတူ: ဖုန်းကို unlocked ဖြစ်ပြီးလျှင်, သော့ခတ်မျက်နှာပြင် (များသောအားဖြင့်စကားဝှက်တစ်ခုသို့မဟုတ် PIN ပေးထားသောတ) ကိုကြည့်ပါ, ငါကရှုခင်းတွေနဲ့မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာသော့ပွင့် (နှင့်ဖုန်းကိုသော့ခတ်လျှင် - ပဲမဆိုလမ်းထဲမှာသော့ဖွင့် ) ။
ယေဘုယျခုနှစ်, function ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်: ကွန်ပျူတာလျှောက်လွှာအစဉ်အမြဲနှစ်ဦးစလုံး devices တွေကို Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားကြသည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက် (ဘလူးတုသ်နှင့်အတူတွဲသည့်အခါဖြစ်ကောင်းအရာရာလွယ်ကူစေရန်နှင့်ထိရောက်မှုဖြစ်ရပြီလို) နှင့်ထို့နောက်အသီးသီးသည်မဟုတ်အခါ, ဒါဟာအလုပ်မလုပ်ပါဘူးနှင့်သော့ဖွင့တစ် PIN သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ခါတိုင်းလိုအဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Samsung က Flow အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအားလုံးအရေးအပါဆုံးအရာတစ်ခုကိုပုံရသည်ဟုပြောသည်။ အထောကျအကူဖြစ်စေခြင်းငှါအခြို့သောအပိုဆောင်းအချက်များကို:
ကွန်နက်ရှင်ကဘလူးတုသ်ကျော်ဖြစ်ပြီး, သင်သည်သင်၏က Galaxy အပေါ်တစ်ဦးကိုမိုဘိုင်း hotspot (ဟော့စပေါ့) ကို run လျှင်, သူကကွန်ပျူတာ (ငါ၏အစခရင်ပုံပေါ်မတက်ကြွသောတဦးတည်း) ရက်နေ့တွင်လျှောက်လွှာကို Samsung Flow အတွက် button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းမရှိဘဲချိတ်ဆက်ဖို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာ, သင် leftmost button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Android မှာ-powered စက်ကိရိယာနှင့်တစ်ဘုံ clipboard ထံကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မျှော်လင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိအမှတ်တံဆိပ်ဖုန်းများများ၏ပိုင်ရှင်များ၏အချို့အဘို့, ညွှန်ကြားချက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ကို၎င်း, ဖိုင်လွှဲပြောင်းစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။